ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ဗျူဟာမြောက်ကာကွယ်ဆေး ပေးသွင်းသူအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံအား ရွေးချယ်မှုက မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြ - Xinhua News Agency
အင်ဒိုနီးရှားက နိုင်ငံ ၂၃ နိုင်ငံမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်မည်
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ ဖနွမ်းပင်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်၌ Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအား ထုတ်ပိုးထားသည့် သေတ္တာပုံးများအား မတ်လ ၂၉ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင် ၊ ဧပြီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဗျူဟာမြောက်ပေးသွင်းသူအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံအား ရွေးချယ်ရန် မှန်ကန်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်အား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအား အစောဆုံး ခိုင်မာသည့် လူအုပ်စုအကြား ကိုယ်ခံအားစနစ် ရရှိရန် ထောက်ကူခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားပညာရှင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ တရုတ်နိုင်ငံက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် Siem Reap Angkor နိုင်ငံတကာလေဆိပ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အား ဧပြီ ၃ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး နိုင်ငံအဆင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ခဲ့ကာ ကာကွယ်ဆေးအများဆုံးမှာ Sinovac နှင့် Sinopharm တို့ ဖြစ်ကြပြီး ၈ လတာအတွင်းမှာပင် လူအုပ်စုအကြား ကိုယ်ခံအားစနစ် အပြည့်အဝ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ တော်ဝင်အကယ်ဒမီရှိ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Kin Phea က ကာကွယ်ဆေးများသည် ပြည်သူများ၏ ဘဝကို ကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးစနစ်အား တည်ငြိမ်စေခဲ့ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကမ္ဘောဒီးယား တော်ဝင်အစိုးရက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဗျူဟာမြောက်ပေးသွင်းသူအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံကို ရွေးချယ်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက ပြည်သူတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေး လုံလုံလောက်လောက် ရှိပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ဧပြီ ၁၉ ရက်တွင် ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ကာကွယ်ဆေးများသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအား လူမှုစီးပွားလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ အပြည့်အဝပြန်လည်စတင်ရန် နှင့် နိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှစတင်ကာ Quarantine မလိုအပ်ဘဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသည့် ခရီးသွားများအတွက် နယ်စပ်ဒေသများအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ထောက်ကူခဲ့ကြောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Kin Phea က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် လူဦးရေ ၁၆ သန်းအနက် လူဦးရေ ၁၄ ဒသမ ၈၆ သန်း သို့မဟုတ် ၉၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ် ထိုးနှံပေးထားကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားသည့် လူဦးရေ ၁၄ ဒသမ ၈၆ သန်း အနက် ၁၄ ဒသမ ၁၂ သန်း သို့မဟုတ် ၈၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနှစ်ကြိမ်နှင့်အတူ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အတူ လူဦးရေ ၈ ဒသမ ၁၂ သန်း သို့မဟုတ် ၅၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် တတိယအကြိမ်ထိုးနှံထားပြီး လူဦးရေ ၁ ဒသမ ၂၄ သန်း သို့မဟုတ် ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် စတုတ္ထအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖနွမ်းပင်အခြေစိုက် Asian Vision အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Thong Mengdavid က ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရာတွင် ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုက ကုန်သွယ်မှု ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ အာရုံစိုက်ရန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအား လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ပြန်ကောင်းလာပါပြီ ။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက နိုင်ငံခြားသားအားလုံးကို အပြည့်အဝ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် မကြာခင်မှာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေ ၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွေ ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင် ကုန်သွယ်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ဧပြီ ၂၀ ရက်တွင် ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖနွမ်းပင်မြို့ BELTEI နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ရှိ အကြီးတန်းပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်သူ Joseph Matthews က ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနှုန်း မြင့်မားမှုနှင့်အတူ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများက အပြည့်အဝဖန်တီးပေးရန် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ တိုးပွားဖြစ်ထွန်းမှုသည် ယခုနှစ် နှင့် လာမည့်နှစ်တွင် အားကောင်းလာရန် ခန့်မှန်းထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်မှာ အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု (RCEP) ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား-တရုတ် လွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်က ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း နဲ့ ကာလအလွန်တို့မှာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး နဲ့ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတွေကို မြှင့်တင်ရာမှာ အဓိကအကြောင်းခံတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB)၏ စီးပွားရေးအစီရင်ခံစာအား ကိုးကား၍ အကြီးတန်းပါမောက္ခ Joseph Matthews က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ဧပြီ ၂၀ ရက်တွင် COVID-19 လူနာသစ် ၂၇ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇကွဲ ကူးစက်ခံရသူများ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး ထပ်မံသေဆုံးသူ ၁ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအထိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၁၃၆,၁၁၇ မှု ရှိပြီး ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်လာသူ ၁၃၂,၈၂၅ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၃,၀၅၆ ဦး ရှိကြောင်း ဌာနက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဆမ်ဒတ် တက်ခ်ဟို ဟွန်ဆန်က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ)၏ နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံအနက် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက် အနည်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၂၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“အခုဆိုရင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက အာဆီယံထဲမှာ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ အနည်းဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်က ဖနွမ်းပင်မြို့၌ ရေကြီးရေလျှံမှုများ ကာကွယ်ရေး နှင့် ရေနုတ်မြောင်းစနစ်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအတွင်း မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Cambodia’s choice of China as strategic vaccine supplier proves right
PHNOM PENH, April 21 (Xinhua) — Cambodia has madearight decision to choose China as the strategic supplier of COVID-19 vaccines, which have enabled the country to achieve strong herd immunity very early, Cambodian scholars said.
The southeast Asian nation launchedanational vaccination drive against COVID-19 in February 2021, with most of the vaccines being Sinovac and Sinopharm, and reached full herd immunity just in eight months.
Kin Phea, director-general of the International Relations Institute at the Royal Academy of Cambodia, said vaccines have protected people’s lives, stabilized health system and helped restore the kingdom’s economy.
“The royal government of Cambodia has made the correct decision to choose China asastrategic supplier of COVID-19 vaccines so that’s why Cambodia has enough vaccines for its people,” he told Xinhua on Tuesday.
Phea said Chinese vaccines have enabled Cambodia to fully resume its socio-economic activities and to reopen its borders to vaccinated travelers without quarantine since last November.
The kingdom has administered one dose of COVID-19 vaccines to 14.86 million people, or 92.9 percent of its 16-million population, the health ministry said, adding that of them, 14.12 million, or 88.2 percent, have been fully vaccinated with two required shots.
Also, some 8.12 million, or 50.8 percent, have taken the third dose, and 1.24 million, or 7.7 percent, have got the fourth jab, the health ministry said.
Thong Mengdavid,aresearch fellow at the Phnom Penh-based Asian Vision Institute, said great success in vaccinations has allowed Cambodia to focus more on boosting trade, investment and tourism.
“Tourism is recovering. Sooner, there will beagradual rise in garment industry, real estate and construction, as well as trade activities as the country has been fully opened to all foreigners,” he told Xinhua on Wednesday.
Joseph Matthews,asenior professor at the BELTEI International University in Phnom Penh, said with its high vaccination rate, Cambodia’s economic and trade activities have returned to full swing, with growth projected to be robust this year and next year.
“The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) trade pact, and the Cambodia-China Free Trade Agreement, which both took effect on Jan. 1, 2022, are the key contributors to boosting Cambodia’s economy and international trade during and after the pandemic,” he said.
Citing an Asian Development Bank (ADB)’s economic report, Matthews said Cambodia’s economy will likely grow by 5.3 percent in 2022 and 6.5 percent in 2023.
Cambodia registered 27 new COVID-19 cases on Wednesday, all of which were confirmed to be the Omicron variant, with one new fatality, the health ministry said, adding that to date, the country has reported 136,117 cases with 132,825 recoveries and 3,056 deaths.
Cambodian Prime Minister Samdech Techo Hun Sen said Wednesday that the kingdom has the lowest number of COVID-19 cases among the 10 countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
“Now, Cambodia has become the country in ASEAN with the lowest number of people infected,” he said inaspeech during the inauguration of flood prevention and drainage system improvement achievements in Phnom Penh.■
Photo 1 – Photo taken on March 29, 2022 shows packages of Sinovac COVID-19 vaccine at Phnom Penh International Airport in Phnom Penh, Cambodia. (Photo by Ly Lay/Xinhua)
Photo2– Aerial photo taken on April 3, 2022 shows the construction site of Chinese-invested Siem Reap Angkor International Airport in Sotr Nikum district, about 40 km from the UNESCO listed Angkor Archaeological Park and 50 km from Siem Reap provincial town, Cambodia. (Photo by Ly Lay/Xinhua)
အာရှဒေသ၏ အနာဂတ်ကို ဒေသတွင်း၏ လက်ထဲ၌သာ ထိန်းသိမ်းသွားရန် သမ္မတ ရှီ တိုက်တွန်း